Yintoni ukwaphuka kwengalo?
Ukwaphuka kwengalo kukuqhekeka okanye ukophuka kwelinye okanye nangaphezulu lamathambo engalweni yakho.
Zithini iintlobo ezahlukeneyo zokuqhekeka kwengalo?
Nondisplosed kuthetha ukuba ithambo laqhekeka okanye laphuka kodwa lahlala endaweni.
Ukufuduswa kuthetha ukuba iziphelo ezi-2 zethambo elaphukileyo zahlulwe.
Ukudityaniswa lithetha ukuba ithambo liqhekeke okanye laphuka laziingceba.
Vula kuthetha ukuba ithambo elaphukileyo langena kulusu lwakho.
Ziintoni iimpawu kunye neempawu zokophuka kwengalo?
Indawo yengalo engaqhelekanga okanye imilo
Intlungu ebuhlungu xa uhambisa ingalo
Ukuba buthathaka okanye ukuba ndindisholo engalweni, esandleni, okanye eminweni
Kufunyaniswa njani ukwaphuka kwengalo?
Umboneleli wakho wezempilo uya kubuza malunga nokwenzakala kwakho kwaye akuvavanye. IX-reyi ingabonisa uhlobo lokophuka onalo. Unokufuna ngaphezulu kwe-x-ray, okanye enye i-x-ray emva kweentsuku ezininzi zidlulile.
Uphathwa njani ukwaphuka kwengalo?
Unyango luya kuxhomekeka kuhlobo luni lokophuka onalo, kwaye ukuba kubi kangakanani. Unokufuna oku kulandelayo:
Isixhobo senkxaso , ezinjenge-brace, cast, okanye splint kunokufuneka ukubamba amathambo akho aphukileyo endaweni. Iya kunciphisa intshukumo yakho yengalo kwaye ivumele amathambo ukuba aphile.
Ii-NSAID , ezinje nge-ibuprofen, zinceda ukunciphisa ukudumba, iintlungu kunye nomkhuhlane. Eli yeza liyafumaneka okanye ngaphandle komyalelo kagqirha. Ii-NSAID zinokubangela ukuphuma kwesisu okanye iingxaki zezintso kubantu abathile. Ukuba uthatha iyeza elicoca igazi, njalo buza umboneleli wakho wezempilo ukuba ii-NSAID zikhuselekile kuwe. Soloko ufunda iilebhile yamayeza kwaye ulandele umkhombandlela.
Acetaminophen kunciphisa iintlungu kunye nefiva. Iyafumaneka ngaphandle komyalelo kagqirha. Buza ukuba ungathatha malini kwaye uza kuthatha kangaphi. Landela izikhokelo. Funda iilebheli zawo onke amanye amayeza owasebenzisayo ukubona ukuba ziqulathe i-acetaminophen, okanye ubuze ugqirha wakho okanye usokhemesti. I-Acetaminophen inokubangela ukonakala kwesibindi ukuba ayithathiwanga ngokuchanekileyo. Sukusebenzisa ngaphezulu kwe-4 gram (4,000 milligrams) iyonke ye-acetaminophen ngosuku olunye.
Iyeza lokunyanga iintlungu inokunikwa. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba ulithatha njani eli yeza ngokukhuselekileyo. Amanye amayeza entlungu anee-acetaminophen. Musa ukuthatha amanye amayeza aqukethe i-acetaminophen ngaphandle kokuthetha nomboneleli wakho wezempilo. I-acetaminophen eninzi inokubangela ukulimala kwesibindi. Iyeza lentlungu linokubangela ukuqunjelwa. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba uthintele okanye uphathe njani ukuqhina.
Ukuncitshiswa okuvaliweyo unokwenziwa ukubeka amathambo akho kwindawo efanelekileyo ngaphandle kotyando.
Vula utyando lokunciphisa kunokufuneka ukuba ubeke amathambo akho kwindawo efanelekileyo. Kusenziwa intambo kwaye amathambo abuyiselwa kwimeko elungileyo. Oku kunokubandakanya ukusetyenziswa kweengcingo, izikhonkwane, iipleyiti, okanye izikrufu.
Ndingazilawula njani iimpawu zam?
Nyusa ingalo yakho ingaphezulu kwenqanaba lentliziyo yakho ngokufuthi kangangoko unako. Oku kuya kunceda ukunciphisa ukudumba kunye nentlungu. Cacisa ingalo yakho kwimiqamelo okanye iingubo ukuze uyigcine iphakanyiswe kakuhle.
Faka umkhenkce engalweni yakho kangangemizuzu eli-15 ukuya kwengama-20 ngeyure nganye okanye njengoko kuyalelwe. Sebenzisa ipakethe yomkhenkce, okanye ubeke umkhenkce otyunyuziweyo engxoweni yeplastiki. Yimboze ngetawuli. Umkhenkce unceda ukuthintela ukonakala kwethishyu kunye nokunciphisa ukudumba kunye nentlungu.
Phumla ingalo yakho kangangoko kunokwenzeka. Buza umboneleli wakho wezempilo xa unokubeka uxinzelelo okanye ubunzima engalweni yakho. Buza kwakhona ukuba ungabuyela nini kwimidlalo okanye kwimithambo.
Yiya kunyango lomzimba njengoko kuyalelwe. Ingcali yonyango ikufundisa imithambo yokunceda ukunyakaza kunye namandla, kunye nokunciphisa iintlungu.
Intlungu engalweni yakho eyenzakeleyo ayipholi okanye iba mandundu, nasemva kokuba uphumle kwaye uthathe amayeza.
Ingalo yakho eyenzakeleyo, isandla, okanye iminwe iba ndindisholo.
Ingalo yakho idumbile, ibomvu, kwaye uziva ushushu.
Ulusu lwakho ngaphezulu kokuqhekeka luyadumba, luyabanda, okanye luthuthu.
Awunako ukushukumisa ingalo, isandla, okanye iminwe.
Ndifanele ndibize nini ugqirha wam?
Izihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana okanye isihlwitha siyaba manzi, sonakale okanye siphume.
Unemibuzo okanye inkxalabo malunga nokwenzakala, unyango okanye ukhathalelo.
Unelungelo lokunceda ekucwangciseni inkathalo yakho. Funda ngemeko yakho yempilo kunye nendlela yokunyanga. Xoxa ngeendlela zokonyango kunye nabanikezeli bakho bezempilo ukuba uthathe isigqibo malunga nokhathalelo olufunayo. Uhlala unelungelo lokwala unyango. Olu lwazi lungentla luncedo kwezemfundo kuphela. Akujoliswanga njenge ngcebiso yezonyango kwiimeko ezithile okanye unyango. Thetha nogqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
Isikripthi seJava esakhelwe kwimisebenzi
ibuprofen kunye nepepto bismol
utshise umculo cd windows 10
Inkqutyana yenaliti yenaliti
yintoni i-pink molly
isetyenziselwa ntoni i-acyclovir